“Waan Hubaa Adiga Iyo Qof kasta Sidaan U Bartay U Baran Lahaa In Indhihiisa Ilamo Ka Iman lahayd Geeridaa naxdinta Badan” – Araweelo News Network (Archive)
Geeridu waa xaq, Waxaase dhacaday geeri naxdin badan, waan hubaa adiga iyo qof kasta oo sidaan u bartay u baran lahaa Marxuum Eng. Aadan Muxe’ed Xuseen inay indhihiisa Ilmo ka iman lahayd oo uu dareemi lahaa murugo marka uu maqlo geeridia Marxuum Aadan Muxe’ed Xuseen
Illaahay naxariistii jano
ha ka waraabiyee wuxuu ahaa qof shaqsiyad fiican oo akhlaaq iyo eedaab badan, isla markaana ma daale ah oo maskax furan. wuxuu jeclaa inuu u naxariisto dadka oo wixii uu owoodo ku gargaaro. wuxuu ahaa marxuum Aadan Muxe’ed Xuseen dalad ama geed hadhweyn oo la hadhsado, isla markaana kulmiya oo ay hadhkiisa isugu yimaadaan dhalinayaro, ama ashkhaas aan heshiis iyagu ahayn, ama aan saaxiibo dhab ah ahayn, balse uu isagu kulmiyay, kuwaas oo aan la’aantii kulmeen, ama aan meel isugu yimaadeen.
Marxuum Aadan Muxe’ed Xuseen wuxuu ahaa intii aan dunida guudkeeda ku noolaa shaqsiyaad fara ku tiris ah oo aan dadnimadooda u bogay, wuxuuna marxuumku ka mid ahaa dadka sifooyinkaa leh ee dunida aynu maanta ku noolahay kasii dhamaanaya. Inaa Lilaalh wa Inaa Ilayhu Raajuciin. Marxuumka wuxuu Axadii 12 February 2012, ku geeriyooday Adna Hospital oo ku yaala Magaalada Hargeysa, kadib markii maalmo yar xanuun dhinaca Neerfayaasha ahi soo waajahay oo sababay inuu socodku ku adkaado, waxaana marxuumka Monday, 13 February 2012, lagu aasay magaalada Hargeysa.
Tafaftiraha Araweelonews Carraale M. Jama oo ay marxuumka saaxiibo qaali ah ahaayeen iyo bahda Araweelonews, iyagoo ka murugaysan geeridaa naxdinta leh, waxay dhmaan saaxiibada iyo skhirstayaasheeda u weydiinaysa inay ugu duceeyaan marxuumkaa oo ahaa shaqsi qiima badan in Illaahay naxariistii jano ka waraabiyo asxaabtii ehelkii iyo qoyskiina samir iyo iimaan ka siiyo. Aamiin Aamiin Aamiin
Inaa Lilaalh wa Inaa Ilayhu Raajuciin
Published February 16, 2012 By info
Madaxweynihii Hore Ee Somaliland Daahir Rayaale Oo Sheegay Inaanu Gudoomiye Xigeenkiisu Ku Metelin Ka Qaybgalka Shirka London, Kana Hadlay Khilaafka Kala Qaybiyay Xisbiga UDUB